About Us - Shenzhen Ariza Electronic Co., Ltd
dubbe degdegga ah baabuur
albaabka alarm shidma
LED Toosh Dhuxul
Shenzhen Ariza Electronic Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2009 oo ay warshad waa in Shenzhen. With10 sano ee horumarinta, ka OEM in ODM, waxaan fiiro iyo aad u badan horumarka waxyaabaha cusub, loogu talagalay lagu daydo oo caan ah oo kala duwan leh sifooyinka Ariza iyo leedahay shatiyada ah, dhamaan noocyada kuwan waxaa sare ansixiyeen macaamiisheena in dal kasta.
Muhiimsan, waxaan ka diiwaan gashan our Ariza brand u gaar ah, BELL TAMA ee USA, Japan iyo Shiinaha si guul leh.
O ur shaqada waa ku caawin qof walba ku noolaado nolol ammaan ah. Waxaan ugu fiican-in-fasalka siiyaan ammaanka qof ahaaneed, ammaanka guriga, iyo waxyaabaha sharci fulinta si aan u weyneyno ammaankaaga. Waxaan ku dadaaleynaa in ay baro, loona macaamiisheena - si, in wajiga of khatar, adiga iyo kuwa aad jeceshahay waxay leeyihiin ma aha oo kaliya waxyaabaha awood badan, Laakiinse aqoontu iyo sidoo. Waxaan aaminsanahay in qof walba waa in la ilaaliyo si ay u noolaan karaan nabad ah, nolosha caafimaad nabadda ee maskaxda.
A Mark Halsey ayaa waxaa ka go'an in ay sii tayada sare ee alaabta iyo adeegyada ay bixiyaan qumman iyo xal, in had iyo jeer ay awoodaan in ay la kulmaan baahida macaamiisha ah ee. Qeybinayay adeeg dheeraad ah oo ku haboon, Ariza ayaa soo bandhigay noocyo kala duwan oo B2B iyo iibka B2C hab cusub. Iyada oo hal-abuurnimo Joogta iyo dabagalka oo kaamil ah, Ariza ayaa leedahay Management System xirfadeed Tayada tan iyo markii la aasaasay. Waxaan si guul helay shahaadada ISO9001 CE RoHS FCC SGS.
Cinwaankaaga: The dhismaha 5aad dabaqa A1, Xinfu warshadaha park, wadada Chongqing, tuulada heping, magaalada fuyong, degmada Bao'an, Shenzhen, Shiinaha 518103